Shina 100 ml boribory tavoahangy feno tavoahangy tavoahangy vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny ronono miaraka amin'ny orinasa Cork sy mpamatsy | Hoyer
Tavoahangy tavoahangy feno tavoahangy 100ml miaraka amin'ny tavoahangy
Fitaovana: Ny tavoahangy dia vita amin'ny vera-litera fotsy be fotsy dia vita amin'ny kitay vita amin'ny tontolo iainana, tsy mila manahy momba ny kalitao sy ny fiarovana azy ireo fotsiny ianao, ankafizo fotsiny amin'ny hevitrao.
Volume: 100ml / 3.5 oz
Haavo: 75mm / 2.95 santimetatra
savaivony: 55mm / 2.16 santimetatra
vozony: 50mm / 1,96 santimetatra
Fampiasana samihafa: Azo ampiasaina ho toy ny tavoahangy izy io, tavoahangy ronono, tavoahangy dite, tavoahangy kafe, voninkazo iray, fampakaram-bady. Azonao atao ny mametaka azy araka ny sainao na ny filanao, toy ny mamelona boribory marobe amin'ny tendany amin'ny tady, asio marika kely, na manoratra ny fiarahabanao amin'ny karatra na taratasy mahafinaritra ho an'ny namanao na fianakavianao. Tena fanomezana tonga lafatra, midika sy famoronana ho an'ny fampakaram-bady, fety nahaterahana na amin'ny andro firavoravoana aza.
Fanamarihana: Azafady, avelao ny ankizy tsy latsaky ny 3 taona na milalao eo ambany fanaraha-mason'ny olon-dehibe, raha tsy izany dia mety handratra raha atsipy amin'ny hafa.
Size Boky: 100ml Haavo: 75mmDiameter: 55mm Neck: 50mm Boky: 3.3 oz Haavo: 2.95 santimetatraDiameter: 2,16 santimetatra Neck: 1.96 santimetatra
Color mazava loko hafa namboarina hafa dia azo ekena ihany koa
Sample a. santionany amin'ny tahiry:QTY: 1–5pcs
Vidiny: nomena malalaka
b. santionany namboarina:QTY: araka ny fitakianao
Vidiny: arakaraka ny lamina manokana sy ny vokatra
Previous: 7 oz 200ml Filazana boribory vita amin'ny vera Jar Jar Jarurt miaraka amin'i Lid
Manaraka: Jarina fitahirizam-bary mahitsy, Jar-bary fitetezana vera miaraka am-borona
16oz Misotro vera Mason Jar
Tavoahangy misy rano 18oz ho an'ny zava-pisotro sy ranom-boankazo ...